﻿“Ngangingu ndabamlonyeni ngoba ngangiphethe ubufakazi ngezimpimpi embuthweni ka ANC,” Zuma – Sivubela intuthuko Newspaper
Owayengu Mengameli wase Ningizimu Afrika uMnu Jacob Zuma ethula ubufakazi kwikhomishana ephenya ngezinsolo zokuqhwagwa kwamandla ombuso. Isithombe: Reuters
OwayenguMongameli wase Ningizimu Afrika uMnuz Jacob Zuma ukhulume ngokubhecwa ngobubende nokuchazwa njengongqondongqondo wenkohlakalo ngesikhathi ethula ubufakazi bakhe kwi khomishana ephenya ngokuqhwagwa kwamandla ombuso.
Uthe ukholelwa ukuthi, “le khomishana yenzelwa mina empeleni, inhloso ngqangi yayo wukubhekisisa ubuholi bami”.
U Zuma ucelwe ukuba ethule ubufakazi bakhe ngaphambi kokuba aphoswe imibuzo abaphethe ubufakazi, lokhu kulandela ubufakazi obethulwa u Mnuz Pravin Gordhan kanye nalabo ababengo ngqongqoshe okubalwa kubo u Fikile Mbalula, Barbara Hogan, Nhlanhla Nene kanye no Ngoako Ramatlhodi- ikhomishana ekholwa ukuthi lobu bufakazi buyamthinta ekuqhwagweni kwamandla ombuso.
“Bekulokhu kukhona intshisekelo yokungisusa emandleni, isifiso sokuthi kumele ngiphume ngiphele, ngiyafisa ukudalula ukuthi konke lokhu kusuka kuphi… kuqhamuka emisebenzini yami engiyenzile ngikwi ANC, nanokuthi ngingubani. Lolu mbimbi luqhamuka ngezindlela ezahlukene,” kusho u Zuma.
UZuma uqhube wathi kusukela ngeminyaka yawo 1990 ubelokhu echazwa njenga nevukela mbuso, uthe nokho uyasola yingoba “unolwazi” olumqoka ngabaholi abayizimpimpi embuthweni ka ANC abahlonzwe njengabaholi abanohlonze beqembu elibusayo.
Phambilini, ummeli ka Zuma u Muzi Sikhakhane uthe ithimba labameli baka Zuma abanalo ulwazi ngazokusho kwikhomishini. U Sikhakhane utshele iNkosi yamaJaji uMnu Raymond Zondo ukuthi angaqagula abathile ngamacala athile abathinteka kuwo.
“Kungenzeka kungabi khona ubulungiswa, besingathanda ukumlungiselela le khomishana,” kusho u Sikhakhane ngaphambi kokuveza ukuthi ithimba labameli baka Zuma babone uhlu lwemibuzo azobuzwa yona, baphinde baqinisekise ukuthi laba azothinta amagama abo bayaziswa.
U Sikhakhane uthe kusukela iqalile ikhomishini, u Zuma uthe uzimisele ukusebenzisana nenqubo yale khomishana. Uqhube wathi u Zuma uwachithile amahlebezi athi akakulungele ukwethula ubufakazi.
U Zuma ukubeke kwacaca ukuthi ube nazo izinkinga nophenyo lokuqhwagwa kwamandla ombuso olwaluholwa owayengu Mvikeli womphakathi u Thuli Madonsela, olwancoma ukuthi kube khona ikhomishana ka Zondo. U Zuma uthe uzokuveza ukungenami kwakhe ngalolu phenyo uma esethula ubufakazi bakhe.